Tuesday August 25, 2020 - 20:37:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro saacadihii lasoo dhaafay ciidamo huwan ah lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Sh/hoose ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Sawir hore qalab askar American ah looga reebtay weerar ka dhacay Sh/hoose 2017
Silsilado qaraxyo ah oo dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay ciidamo isugu jiray American iyo Bangaraaf kula beegsadeen deegaanka Daarusalaam ee duleedka Awdheegle ayaa sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 askari oo soomaali ah ay ku dhinteen qaraxyada halka uu dhaawac kasoo gaaray Askari American ah.
Askariga Mareykanka ah ee dhaawacmay ayaa qeyb ka ahaa kolonyo gaadiid qafilan ah oo shalay iyo maanta dhaq dhaqaaqyo ka waday duleedka Awdheegle.
Dhaawaca Askariga American-ka ah ayaa loo qaaday garoonka Balidoogle oo uu kuyaal saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay dalka Soomaaliya, deegaanka Daarusalaam ee Askariga Mareykanka ah lagu dhaawacay waa isla deegaankii sanaddii 2017 lagu dilay Kyle Milliken oo ahaa 38 sana jir.
Sarkaal katirsan maleeshiyaadka lagu tababaray Saldhigga Mareykanka Balidoogle ayaa kamid ahaa askartii ku dhintay weeraradii maanta dhacay,
Cabdullaahi Cali Galmaax oo ah sarkaal Balidoogle lagu tababaray iyo 2 askari oo ilaala u aheyd ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qarax lagula beegsaday wadada xiriirisa deegaannada Mubaarak iyo Daarusalaam.